Algernon Charles Swinburne, mudetembi wechiVictorian | Zvazvino Zvinyorwa
Algernon Charles Swinburne aive mudetembi wechiRungu uyo ​​akazvarwa ari 5 April 1837 en London. Chimiro chake chaigona kunge chakafukidzwa nemamwe mazita anopenya kubva kunguva yaive navo mumaspareti, asi akazivikanwawo pasi rese. Basa rake, aine hunyanzvi kumatimu akadai se kuzviuraya, ungochani, sadomasochism uye zvinopesana nechitendero manzwiroIzvo zvaive pachena kuti zvine nharo panguva iyoyo. Nhasi kubva pano Ndinoda kuzvirangarira achiratidza mamwe mavhesi ake.
4 Rudo uye hope
5 Zuva risati ravira
6 Nembira, nembira
Swinburne, anobva kumhuri ine mbiri anogara mu Isle of Wight, Akadzidza chiFrench neItaly nekutenda kudzidziso dzaamai vake nasekuru vake baba. Iye zvakare akagashira yakasimba dzidziso yechitendero iyo yakagara mukati mehudiki hwake. Akaenda kune vane mbiri Eton Koreji uye zvakare kudzidza ku Oxford University. Waive zvakare nhengo ye Pre-Raphaelite Hama uye anoyemura zvikuru Victor Hugo, kwaakatsaurira imwe yenyaya dzake.
Ane maperembudzi, Atalanta muCalydon, Nhetembo uye mabharadhi, Nziyo kusati kwaedza, Nguva yaShakespeare y Maria Estuardo. Semuenzaniso, mune yezvakaitika trilogy yemabasa pamusoro paMambokadzi Mary weScots, uko kunokosheswa kuti hunhu hwake hunobata kubatwa kwepabonde kwakakodzera mumwe wevadzidzisi vavo vakuru, Marquis de Sade. Uye yake yerotic novel Lesbia Brandon yakaramba isina kutsikiswa kusvika 1952. Kana izvo Pasiphae, iyo isina kuburitswa munguva yeupenyu hwanyanduri.
Zvakare zvakanyorwa zvidzidzo zvakakosha nezva william Shakespeare uye zvinyorwa pavanyori vazhinji vakaita saCharles dickens nehanzvadzi Charlotte.
Kupindwa muropa kwake doro zvakaita kuti atambure nezvinetso zvakakomba zvehutano izvo zvakamumanikidza kutamira kune imwe imba kumucheto kwe London. Ikoko aida kuyedza kurarama hupenyu hune hutano uye hwakadzikama. Akafa muna Kubvumbi 10, 1909.
Kusuruvara, kuva nemapapiro kuti iwe unofamba nyika,
Pano nepapo, kuburikidza nenguva, kukumbira zororo,
Kana zororo nderimwe mufaro unodiwa neshungu.
Pfungwa iri pedyo nemoyo wako
Kusuruvara kwakadzika kwekupisa kwakanyanya,
Huswa hwakaoma murwizi runokwira,
Musodzi mutsvuku unomhanya nemurukova.
Mwoyo inodambura ngetani
Zuro chisungo chichava kukanganwa mangwana
Zvinhu zvese zvepano pasi zvichapfuura
Rudo uye hope
Yakatambanudzwa uye ikarara pakati pehusiku caress
Ndakaona rudo rwangu rwakazendamira pamubhedha wangu wakasuruvara,
rakachenuruka semuchero uye shizha rerima rakasviba,
wakashama, wakakururwa uye wakasuwa, uine mutsipa usina kupfeka, wakagadzirira kurumwa,
yakanyanya kuchena kuti itsvuke uye inopisawo kuti ive isina mhosva,
asi yeyeruvara rwakakwana, isipo chena uye tsvuku.
Uye miromo yake yakaparadzaniswa zvinyoro, iye ndokuti
- mune izwi rimwe chete- mafaro.Uye kumeso kwake kwese kwakave huchi kumuromo wangu,
uye muviri wake wose waiva chikafu chemeso angu;
Maoko ake marefu, ane mhepo uye maoko anopisa kupfuura moto
mitezo yake ichirova, hwema hwebvudzi rake rekumaodzanyemba,
tsoka dzake dzakareruka uye dzinopenya, ake akasimba uye zvidya zvine rupo
uye zvivharo zvinojeka zvakapa mweya wangu chishuwo.
Zuva risati ravira
Twilight rudo runodzikira mudenga
Usiku husati hwadzika pasi
Kutya kusati kwanzwa simbi yayo kubva kuchando,
Manheru erudo anonyangira mudenga.
Kana moyo usingagutsikane uchizevezerana pakati pekuchema
"Zvimwe zvakawandisa kana zvishoma",
uye miromo yakanyarara kuti iome,
Nyoro, pasi pemutsipa wevose vanoda,
maoko erudo anobata pakavanzika payo;
uye apo isu tichitsvaga chiratidzo chekongiri maari,
chiedza charo chemadekwani chiri kubvarura mudenga.
Chido chakadzama, chinopinda pamoyo uye mudzi wemweya,
Anowana izwi rake rekuzeza mundima dzaanoshuva, kunge kupisa moto;
Kutora izwi rake rekufara kana mimhanzi ichiteedzera zvisina maturo
Kuchenesa apo iko kushuva kwerosi kuchipisa maruva ayo kufema,
Yakasimba apo buds inoshuvira michero inokura,
Chakavanzika chisingataurwe chinonzwika kupedzera ruzha rwayo rwakadzika.
Kubvutwa kune runyoro nyoro rerudo kunodzika;
Kubata kwekukunda kwembira kunodzika:
Zvakadaro mweya unonzwa kupisa, murazvo unoburitswa kunyangwe wakanyarara
Mukuda kwake kwakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Algernon Charles Swinburne, akatuka mudetembi wechiVictorian